analysis(analysis) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
मुख्य सूचकहरुमा एनआइसीको छलाङ, टप फाइभमा को–को परे ?(तुलनात्मक टेबलसहित)
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका निजी क्षेत्रका १५ वटा बैंकमध्ये अधिकांश वित्तीय सूचकमा एनआइसी एशियाले चमात्कारिक प्रगति गरेको देखिएको छ। मुख्य वित्तीय सूचकतर्फको प्रगतिमा एनआइसी एशिया अरुभन्दा अगाडि छ भने अधिकांश सूचकमा टप ५ भित्र पर्न सफल देखिएको छ। हामीले १५ वटा बैंकमध्ये मुख्य...
यस्तो छ 'शंकरदेवको चियागफदेखि आमरण अनशनसम्म'को इन्साइडर स्टोरी
तिलक कोइराला नेपालको शेयर बजार सुधार र बिस्तारको यसपटकको दबाबमूलक अभियानमा शंकरदेव क्याम्पसको चिया, झ्यापुल्टे कपालवाला युवा र आमरण अनशनसँग अन्तर सम्बन्धित कुराहरु ईतिहासमा लेख्न लायक बनेका छन् । २०७५ साल मंसिर ९ गते पुतलीसडकको शंकरदेव क्याम्पसमा साँझपख चारवटा लगानीकर्ता संघका नेताहरुसहित केही ब्यक्तिहरु भेला भएका रहेछन् ।...
-अनलराज भट्टराई नेपालमा बसेर विजिनेश गर्न त्यसै पनि कठीन छ । आयात खुल्ला छ, यहीँ उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने खाँचो छ । उत्पादकत्व बढाउनका लागि बैंक ब्याजदर न्यून हुनुपर्छ । तर, बुधबारदेखि ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको जस्तो देखिएको छ । यो राम्रो होइन । ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमा राम्रो...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सबै वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशन गरिसकेका छन् । देशका २८ वटा वाणिज्य बैंकमा पहिलो त्रैमासमा समेत खूद नाफा बढी कमाउने बैंकको रुपमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निजी बैंकले उछिन्न सकेनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको आफ्नो पोजिसनलाई कायम राख्दै राष्ट्र�...
-अनलराज भट्टराई यसपालि अलिक चाँडै विभिन्न कारणले तरलता अभावको समस्या देखियो । दशैं पछाडि क्रेडिट ग्रोथ बढी होला भन्ने सोचिएको थियो, तर त्यस्तो भएन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा धेरै क्रेडिट ग्रोथ नहोला भन्ने अनुमानले पनि फेल खायो, यही अवधिमा यो वर्ष बढी क्रेडिट ग्रोथ भयो । यसमा विभिन्न कारण पनि छन् । जस्तो: यो पटक आयात निकै बढ्न...
राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका ८ सूचकको चिरफारः टप फाइभमा कुन-कुन ?
काठमाण्डौ । हाल अस्तित्वमा रहेका ११ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक गरेका अपरिस्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा नाफातर्फको प्रगतिको विश्लेषण यसअघिको अंकमै गरिसकिएको छ । खूद नाफातर्फ ११ बैंकमध्ये कसको प्रगति कस्तो रह्यो, पढ्नलाई...
-अजयकुमार मिश्र बैंकहरुले अर्थतन्त्रको सवलीकरणकै लागि धेरै सोचविचार गरेर करिब तीन महिनाअघि मुद्धती निक्षेपमा ११ र साधारण बचत खातामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए । तर, अनेकन दवाब र आलोचनापछि खुल्ला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै त्यो सहमति खारेज भएसँगै देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ब्याजदर वृद्धिको...
अनलराज भट्टराईको विश्लेषण:बजेटले पूँजीबजारको अन्यौल हटायो, निक्षी क्षेत्रलाई उस्तै प्रोत्साहन
-अनलराज भट्टराई समग्रमा बजेट ठीकै लाग्यो । मैले पुरानो र अहिलेको बजेटमा त्यति धेरै डिपार्चर देखिँन । संघीय सरकारको बजेट भएको हुनाले राजश्वमा धेरै दवाब थियो सरकारलाई, राजश्व धेरै बढ्ला भन्ने जनमानसमा अन्यौल पनि थियो। तर, करका दरहरुमा खासै परिवर्तन भएको देखिएन । गाडीमा अन्तशुल्क बढाउने, मदिरा लगायत स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने बस्तुमा...
उत्कृष्ट बन्न विकास बैंकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा, कैलाशको स्थान कुनले लियो ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले लिएको मर्जर तथा एक्वीजिसनको नीतिको सबैभन्दा धेरै प्रभाव विकास बैंकहरुमा परेको देखिएको छ । यहीकारण पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको संख्या १२ वटा रहेको छ । यीमध्ये पनि टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक मेगा बैंकसँग मर्जरमा जाने निश्चित भएकोले राष्टिय स्तरका विकास बैंकको संख्या ११ मा सीमित हुनेछ...
-अनलराज भट्टराई, बैकिङ विश्लेषक एनआइसी एशिया बैंकलाई भद्र सहमतिविपरीत ब्याजदर बढाएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले अन्तरबैंक कारोबारमा सहभागी नगराउन भनेर २७ वटा बैंकलाई पत्र पठायो । ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार एनबिएले राख्नसक्छ ? यसले आगामी दिनमा कस्तो परिस्थिति निम्त्याउन सक्ला ? -पहिला त द्वन्द्व कहाँबाट सुरु भयो, त्यो...
२८ वाणिज्य बैंकको १० सूचकको चिरफार: कुन बैंकको प्रगति कस्तो ? कुनमा लगानी गर्नु उत्तम ?(टेबलसहित)
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधारभूत पक्ष भन्ने बित्तिकै प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्यआम्दानी अनुपात, नेटवर्थ प्रमुख रहन्छ । यसले कम्पनीको चुरो वित्तीय अवस्था बताउँछ भने खुद ब्याज आम्दानी र आम्दानीको स्रोत, खराब कर्जाको अवस्था र संभावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता, पुँजीकोषको अवस्था, व्यवसायिक विस्तार, खुद सम्पतिमा प्रतिफलको...
बुटवल पावरको एफपीओमा लगानी कति सुरक्षित ? कति कित्ताका लागि आवेदन दिनु उचित ?
काठमाण्डौ । बुटवल पावर कम्पनी लिमीटेडले आज(सोमबार)देखि ४० लाख ८१ हजार कित्ता साधारण सेयरको अतिरिक्त निश्कासन(एफपीओ) गरेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरको सेयरमा ४०१ रुपैयाँ प्रिमियम थपी प्रतिकित्ता ५ सय १ रुपैयाँको दरले एफपीओ बिक्री खुलाएको हो । एफपीओका लागि इच्छुकले आस्वा सदस्य बैंक तथा बित्तीय संस्था र तिनका शाखामा गएर आवेदन...
तरलता समस्यामाथि अजय मिश्रको विश्लेषण, यस्ता छन् कारण र समाधान
►अजयकुमार मिश्र-(डेपुटी सीइओ):जनता बैंक नेपाल लिमीटेड लगानीयोग्य पूँजीको अभावले अहिले देशका बैंक तथा बित्तीय संस्था ग्रस्त छन् । समाधान खोज्नुुअघि यस्तो समस्या के कारणले आयो भनेर कारणहरुको बिषयमा चर्चा गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । गत वर्ष झै यो वर्ष पनि पुस महिनामै लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या बल्झिनुु पछाडिका मुख्य कारण हेरौं: पहिलो,...